विवाहको लागि बर र बधुको चिना मिलाउनु जरुरी छ ? चिना मिलेन भने के हुन्छ ? ज्योतिषशास्त्र के भन्छ ? « Sajha Page
विवाहको लागि बर र बधुको चिना मिलाउनु जरुरी छ ? चिना मिलेन भने के हुन्छ ? ज्योतिषशास्त्र के भन्छ ?
-सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ